आलिया बनिन् बेहुली, सुटुक्क गरिन् विवाह ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/आलिया बनिन् बेहुली, सुटुक्क गरिन् विवाह !
एजेन्सी । बलिउड नायीका आलीया भट्टको एउटा तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको छ । उनी बेहुली बनेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हो । यस तस्वीरमा उनी आफ्नो हातमा मेहंदी पनि देखिन्छिन्। प्रशंसकहरू यो चित्र हेरेर अनुमान लगाउँदैछन् कि तिनीहरूको गोप्य विवाह हुँदैछ ।
हातमा मेहन्दी, निधारमा टिका र दुलही भेषमा उनको तस्बिर भाइरल भएको हो । अभिनेत्री आलिया भट्टको त्यस्तै तस्वीर छ, यस फोटोमा आलिया दुलहीको लुकमा देखिन्छिन्, जो आफ्नो अनुहारमा राम्रो मुस्कानको साथ हातको मेहन्दी पनि देखाएकी छन् । आलिया पेच कलर लेहेंगामा धेरै सुन्दर देखिन्छ।
आलियाको यो तस्बिर हेरेपछि अनुमान लगाइन्छ कि अभिनेत्रीले उनको प्रेमी रणबीर कपूरसँग बिहे गरेकी छन । तर यो अनुमान भने गलत सावित भएको छ । वास्तवमा, आलियाको यो तस्वीर विज्ञापन शुटको सेटबाट आएको हो। प्रसिद्ध हेन्ना कलाकार वीना नगराले आलियासँग यो तस्वीर साझा गरेकी छन। प्रशंसकहरू चाहान्छन् कि आलिया भट्ट चाँडै दुलही बनुन् ।
आलियाको यो फोटोमा, प्रशंसकहरूले मायाको वर्षा गर्दै छन् साथै टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। आलिया वास्तविक जीवनमा दुलही बन्नको लागि प्रशंसकहरू उत्साहित छन्। यस तस्विरमा, प्रशंसकहरूले उनको सुन्दरताको प्रशंसा गरिरहेका छन् र उनलाई रणबीर कपूरसँग विवाह गर्न पनि आग्रह गरिरहेका छन्।
रणबीर र आलियाको बिवाहको खबर धेरै समयदेखि आइरहेको छ । यो जोडी गत वर्ष २०२० मा विवाहमा बंधिनेछ, तर कोरोना भाइरस महामारीको कारणले यस्तो हुन सकेन। त्यहि समयमा, जब रणबीर र आलिया नयाँ परिवारमा परिवारसहित राजस्थान पुगेका थिए, त्यस बेला यस्तो अनुमान पनि गरिएको थियो कि ती जोडीले राजस्थानमा गोप्य विवाहको योजना बनाउँदैछन्, तर यस्तो केही भएन।
जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना राजेश हमाल ‘ह्याप्पी बर्थ डे’ राजेश हमाल
टिकटकमा तहल्का मच्चाएका डान्सहरु#Tiktok_viral_dance
फे’री अ’र्की बे’हुली भा*इर’ल, वि’दा’ई प’छि मु’स्कु’राउँ’दै ज’व वे’हु’ली नै का’र हि’डि’न् (भिडियो हेर्नुस्)…’र च’ला’एर वे’हुला’को घ
नायिका स्वस्तिमा ,,खड्का,, साउथ इण्डियन फिल्ममा ,,डेब्यू गर्दै